आलियालाई छोडेर ज्याक्लिनसँग रोमान्स गर्दै सिद्धार्थ मल्होत्रा ! – Medianp
आलियालाई छोडेर ज्याक्लिनसँग रोमान्स गर्दै सिद्धार्थ मल्होत्रा !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, असार २४, २०७५०८:३७0
मुम्बई । बलिवुडका अहिलेका चल्तीका नायक सिद्धार्थ मल्होत्रा आफ्नो अफयेर्सका कारण अहिले चर्चामा रहेका छन् । सँगै बलिवुडमा डेभ्यु गरेकी अभिनेत्री आलिया भट्टसँग ब्रेकअप पछि अहिले सिद्धार्थ र ज्याक्लिन फर्नान्डिसको रोमान्सको खबरले अहिले बलिवुड तातेको छ ।
यसअघि ज्याक्लिनसँग सिद्धार्थको हिचमिच बढेपछि नै अलियाले सिद्धार्थलाई छोडेको खबर आएको थियो । सिद्धार्थ र ज्याक्लिनले केहिसमय अघि सँगै अभिनय गरेको फिल्म अ जेन्टलमेन देखिनै दुवैको अफयेर्सको चर्चा चेल्को थियो । सो फिल्मपछि पनि दुवै धेरै पटक सँगै देखिन थालेपछि उनीहरुको अफयेर्सको चर्चा झन् बढेर आएको छ ।
ज्याकलिन धेरै जसो सिद्धार्थको घरमा देखिने गरेको बलिवुडको रिपोर्टिंग गर्ने स्पट ब्वायले उल्लेख गरेको छ । सिद्धार्थ र ज्याक्लिन अहिले मुम्बईको बान्द्रामा बस्ने गर्दछन् । मिडिया रिपोर्टका अनुसार दुवैले मुम्बईको जुहू इलाकामा नजिक नजिक घर हेरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सिद्धार्थले अहिले एकता कपुरको फिल्म ‘शटगन शादी’ साइन गरेका छन् भने ज्याक्लिनले सलमान खानसँग रेस ३ को सुटिंगमा व्यस्त छन् ।
फसादमा निकिता !
महान फुटबलर, जसले विश्वकप उपाधि जित्न सकेनन्